Min Ko Naing – Shouting on the World’s roof – – PVTV Myanmar
Zawzaw Phoe says:
2021-07-16 at 2:06 PM
ပွညျတှငျးဖွဈ Covid ကာကှယျရေး
တဦးနဲ့ တဦး ကူညီဖေးမရေး
banana superman 5648 says:
💯💯💯💯💯💯Ko Min Ko Naing💯💯💯💯💯💯🙏🏼🙏🏼
Kaung Htet Shwe says:
2021-07-16 at 4:07 PM
ဘဝဆကျတိုငျး လူပွနျမဖွဈပါစနေဲ့ မအေးလိုး ခှေးမြိူး စစကတှေ
2021-07-16 at 8:19 PM
Buscari Pai says:
2021-07-16 at 8:35 PM
Love Knot says:
2021-07-16 at 9:40 PM
Ko hla Chit says:
2021-07-16 at 10:21 PM
2021-07-16 at 10:22 PM
Ain Jin says:
2021-07-17 at 12:59 AM
NUG က ပြည်သူတွေအတွက်ဘာများလုပ်ပေးပြီးပြီလဲ..?? မသိလို့ပါ
ဆက်ပီးအငြင်းပွား အပြစ်တင်နေကြမဲ့အစား ပြည်သူကို တတ်နှိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီခြင်းဖြင့်သက်သေပြပါ။ ပြည်သူတွေစိတ်ညစ်နေရတဲ့အထဲ ရေနစ်သူဝါးကူထိုးမနေကြပါနဲ့။ ပြည်သူကို ကာကွယ်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့လဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြပါ ပုန်းပီးလှော်နေတာရပ်သင့်ပီ အလုပ်နဲ့သက်သေပြပါ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင်၂ဖက်စလုံး အာဏာရူးနေပီး ပြည်သူကို ဘောလီဘောပုတ်နေကြတာပဲမြင်တယ်။
မြန်မာပြည်ကြီး ကပ်ရောဂါဘေးမှ အမြန်ကင်းလွတ်ပါစေ အကြမ်းဖက် အာဏာရူးများလက်မှလဲအမြန်ကင်းလွတ်ကြပါစေ
2021-07-17 at 1:00 AM
2021-07-17 at 6:07 AM
2021-07-17 at 8:50 AM
NUG should write Hand Book for PDF's. It should give guidance in details
on how all PDF's should establish safe houses, how they should
communicate secretly, how to prevent and detect moles within your
organization, how to smuggle weapons, how to collect weapons, how to
gather and collect intelligence etc. There are many topics that can be
covered. Since many of the PDFs are young Generation Zs that do not have
training in this kind of matters, it would be very helpful.
kophyo lay says:
2021-07-17 at 10:54 AM
2021-07-17 at 3:40 PM
Phoe Lay says:
2021-07-17 at 7:30 PM
Sherhtet Nyo says:
2021-07-18 at 5:33 AM
၇ရကျသားသမီးပွညျသူကို ဒုက်ခ​ရောကျ​အောငျလုပျသူမှနျသမြှ သာသနာကှယျပ ​ရောကျပွီသာမှတျ ငရဲတံခါးက လညျးပှငျ့​နပေီ ငါသစ်စာဆိုတယျ ပွညျသူကို ဒုက်ခ​ရောကျ​အောငျလုပျသူမှနျသမြှ ယခုဘဝ၌ပငျ လုပျသမြှမ​အောငျမွငျပါ​စနေဲ့
Aung Shwe says:
2021-07-18 at 12:44 PM
2021-07-18 at 5:38 PM
Pan Kalay says:
2021-07-27 at 7:06 PM
God bles you ko min ko nain .
2021-08-26 at 4:16 PM
2021-09-20 at 12:40 PM
မေးတဲ့သူက လသေံသိတျမမှနျသလိုဘဲ။ သတငျးသမား ပီသတဲ့လသေံ မဟုတျသလိုလို၊ မေးတဲ့မေးခှနျးကို မဆိုလိုဘူးဗြ၊ လသေံကိုပွောပါတယျ။
Fire Ninger says:
2021-10-14 at 12:33 PM
2021-10-22 at 3:23 PM
မငျးကိုနိုငျစကားကို နားထောငျလို့ ဒုက်ခရောကျတဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိတယျ။ဦးနှောကျနညျးတဲ့သူ ခံကွပေါ့